Ukusetyenziswa kokuhluzwa kweembrane kwimveliso yezolimo kunye necala elisecaleni
Ixesha Post: Aug-06-2021
Kwimveliso yezolimo kunye necala elisecaleni, iwayini, iviniga kunye nesosi yesosi ifakwa kwisitatshi, okusanhlamvu. Ukucocwa kwezi mveliso yinkqubo ebalulekileyo yemveliso, kwaye umgangatho wokuhluza uchaphazela ngokuthe ngqo umgangatho weemveliso. Iindlela zokucoca zemveli zibandakanya n ...Funda ngokugqithisileyo »
Ukuhluza okungafunekiyo kunye nokucoca ulwalamano
Kukhetho lwezinto zokucoca ulwelo / isihluzo, Akonelanga ukuba kuthathelwa ingqalelo umlinganiso wefilitha kunye nobungakanani beendawo zokuhlala, kodwa kufuneka kwakhona uqwalasele ukusebenza kweefilitha. 1.Ukulinganisa igama: Kwixesha elidlulileyo, ukulinganiswa kwamagama bekusetyenziselwa ukuchaza ukuchaneka kokucoca ulwelo. H ...Funda ngokugqithisileyo »
Inwebu yokusonga into yokuhluza intshayelelo
Ixesha Post: Jul-08-2021
“Ukuhluza” kubhekiswa kukwahlulwa kwamasuntswana aqinileyo okanye amasuntswana eerosol kulwelo (igesi / ulwelo) kulwelo. Isixhobo esisetyenzisiweyo ukufezekisa lo wahlulo sisixhobo secebo lokucoca ulwelo. Isixhobo secebo lokucoca ulwelo kufuneka sifakelwe isixhobo secebo lokucoca ulwelo Kuphela xa izinto zokucoca ulwelo kwi ...Funda ngokugqithisileyo »
Yintoni le microporous ulwelo ulusu lokucoca ulwelo
Ixesha Post: May-27-2021
Iimpawu eziphambili ze-microporous membrane yokusonga isihluzo sesi: Inkqubo yemveliso yamkela ubuchwepheshe obunyibilikisiweyo bokunyibilikisa ubuchwephesha, ngaphandle kokuncamathela, akukho mcimbi welinye ilizwe ...Funda ngokugqithisileyo »
Ukwakhiwa izindlu filter steel stainless
Ixesha Post: Apr-06-2021
Izindlu ngokubanzi zenziwe ngentsimbi engenasici, kwaye ingaphakathi lisebenzisa i-PP ukunyibilika okuvuthelweyo, inxeba yomtya, icebo lokucoca ulwelo, isihluzi se-titanium, isihluzi sekhabhoni esisebenzayo kunye nezinye izinto zokucoca ulwelo njengezihluzi. Izinto ezahlukeneyo zeefilitha zikhethwe ngokungafaniyo ...Funda ngokugqithisileyo »
Ukuvelisa njani iCartridge yokucoca?
Ixesha Post: Mar-06-2021
1. Ukucoca umatshini wephepha ukuvelisa iiplastriji zeefilitha. Ukubeka imithombo yeendaba yokuhluza esemgangathweni enobubanzi obufanelekileyo kwiroller, umatshini wokucenga uqala ukwenza ezinye iipleyiti njengelinge lokubaleka ukulungisa isantya se-pleating kunye nokuphakama kwembambano. Uyilo elincotyiweyo ...Funda ngokugqithisileyo »
Ixesha Post: Feb-16-2021
Ukucocwa kwe-Kinda kuseke ilabhoratri enkulu, enokunika iseti epheleleyo yovavanyo kunye nenkonzo yokuqinisekisa amayeza, ukutya kunye nesiselo kunye neefilitha zeshishini lokucoca ulwelo, kunye nezisombululo zokuhluza ezichanekileyo kunye namaxwebhu ...Funda ngokugqithisileyo »
Bldg D, Jinxiongda Tech Park, Xingyuan Road, Datanglang Village, Dalingshan Town, Dongguan, Guangdong kwiphondo, China